URedmi sele eqala ukusebenza kwifowuni yakhe yokuqala ye-5G | I-Androidsis
URedmi sele esebenza kwifowuni yakhe yokuqala ene5G
Ukusukela kule ntwasahlobo sinako thenga iifowuni zokuqala ze-5G kwintengiso ngoku. Kwimeko yeSpain Sele sikhethe kakuhle kwiimodeli ezikhoyo. Kwakhona, iimveliso ezininzi ze-Android sele zisebenza kwiifowuni ezihambelana ne-5G. Abokugqibela kubo ukuba baqinisekiswe nguRedmi. Umphathi wayo upapasha oko kwimidiya yoluntu.
Nangona kunjalo URedmi uqalile nje inkqubo yokuyila ingaba yeyiphi ifowuni yakhe yokuqala ene-5G. Kodwa uphawu lwaseTshayina lujamelene nengxaki enkulu kule meko, xa kusenziwa isixhobo. Ke ngoko, babuza abasebenzisi babo kwinethiwekhi yoluntu e-China ukuba bathanda ntoni.
Ukususela olu hlobo lweefowuni lunzima kuneemodeli eziqhelekileyo, kuba bafuna okanye basebenzise ibhetri enkulu. Ke ngoko, kwaRedmi babuza abasebenzisi ukuba bakhetha ntoni. Ukuba ufuna ifowuni ngebhetri engaphezulu, kodwa inzima, okanye ukuba ukhetha imodeli yokukhanya enokuzimela okuncinci. Ingxaki abajongene nayo ngoku.
Okwangoku kubonakala ngathi esi sixhobo sikwisigaba sokuqala kakhulu, ukuba le yinto ekhathaza uphawu ngoku. Kodwa ubuncinci siyabona ukuba sele benesicwangciso sokubandakanya i-5G kwezinye zeefowuni zabo kungekudala.
Okunokwenzeka ayizukude i-2020 xa le fowuni yeRedmi iphela ifika ezivenkileni. Ukuba usesigaba sokuqala semveliso, okanye uyila nje ifowuni, kuya kuthatha iinyanga ezimbalwa ukuba ilungele. Ke kubonakala ngathi u-2020 ngumhla ofanelekileyo.
Ngayiphi na imeko, ke bajoyina uluhlu olubanzi lweemveliso ezikwi-Android, eziza kusishiya ngo-2020 ngeefowuni zabo zokuqala ze-5G. Kungenzeka, kwiinyanga ezimbalwa ezizayo masiqhubeke sazi ngakumbi ngesi sixhobo kuneRedmi Ndizokwazisa ezivenkileni. Siya kunika ingqalelo njengoko sisaziwa ngakumbi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » URedmi sele esebenza kwifowuni yakhe yokuqala ene5G
Ibhetri enkulu ye-5000 mAh yile nto iRealme 5 iya kuba nayo
INokia iya kukhupha uhlaziyo lokhuseleko lweefowuni ngaphezulu kweminyaka emi-2 ubudala